မိုဘိုင်းလ်ကို ကတ်ဖြင့် အမြန်ဖြည့်သွင်းပြီး ဆုတ်ယုတ်မှုမရှိဘဲ - မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ပါ။
သင့်မိုဘိုင်းတွင် လက်ကျန်ငွေကုန်သွားသောအခါ၊ သင့်ဖုန်းလိုင်းထဲသို့ ငွေထည့်နည်းကို သင်စဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ကတ်ဖြင့် မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းခြင်းသည် သင့်ဖုန်းထဲသို့ ငွေမြန်မြန်ဆန်ဆန် ထည့်ရန် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မတူညီသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကုမ္ပဏီများသည် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များနှင့် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုပမာဏများဖြင့် ငွေပြန်သွင်းမှုများရှိသည်။ ဝဘ်မှလက်ကျန်ငွေထည့်ရန် သို့မဟုတ် သင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမှ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
သင့်ဘဏ်ကတ်များကို ငွေပြန်ဖြည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုနည်းကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူနေကာ ၎င်းအား ဤနေရာတွင် ရှင်းပြပါမည်။ ထို့အပြင်၊ မိုဘိုင်းငွေဖြည့်များအတွက် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များကို အသုံးပြုနည်းကို ပြောပြပါမည်။ ဟန်ချက်မညီမှုကြောင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါစေနှင့်။
သင်၏ ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏လက်ကျန်ငွေကို အွန်လိုင်းမှ သင့်တယ်လီဖုန်းလိုင်း၊ သင့်ကွန်ပျူတာမှ သို့မဟုတ် သင့်မိုဘိုင်းမှ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။တည်ရှိနေသော ဝဘ်စာမျက်နှာများစွာတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤဝန်ဆောင်မှုပါရှိသော မတူညီသော ငွေဖြည့်ကုမ္ပဏီများ၏ အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။
အချို့သောဘဏ်များတွင် သင့်မိုဘိုင်းလ်ကို ကတ်ဖြင့် ဘေးကင်းစွာ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် ATM စက်များမှ ငွေပြန်သွင်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ သင့်ဘဏ်ကတ်များကို အခွင့်ကောင်းယူခြင်းကို မရပ်တန့်ပါနှင့် အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါစေနှင့်။
သင့်ဘဏ်ကတ်များဖြင့် အားပြန်သွင်းရန် သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြုပါ။. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအား ကတ်တစ်ခုဖြင့် အားပြန်သွင်းလိုပါက၊ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည့် အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများ ရှိပါသည်။
သင့်ကွန်ပြူတာမှ အားပြန်သွင်းရန်၊ သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို အသုံးပြုသည့် တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီအမည် သို့မဟုတ် သင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် အားပြန်သွင်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝဘ်စာမျက်နှာအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။ အသုံးအများဆုံးအချို့မှာ- ding, ဆရာဝန်, လွယ်ကူစွာအားပြန်သွင်းပါ။, WorldRemit, ဖောင်ငွေအချင်းချင်း၊
အားပြန်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖောင်တွင် နိုင်ငံ၊ သင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ အားပြန်သွင်းရမည့်ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုပါ။ ကတ်တစ်ခုဖြင့် မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမှ မလွယ်ကူပါ။
သင့်မိုဘိုင်းမှ သင့်လိုင်းကို အားပြန်သွင်းရန် သင့်စက်ပေါ်တွင် သင့်ဘဏ် သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်ရာ ဝဘ်ဆိုက်၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။. ထိုနေရာရောက်သည်နှင့် သင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရမည့်ပမာဏနှင့် သင့်ဘဏ်ကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
အပလီကေးရှင်းများကို iOS နှင့် Android လည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် App Store သို့မဟုတ် Google Play တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ATM စက်များတွင် ကတ်များဖြင့် ငွေဖြည့်ပါ။
သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအား ATM စက်များတွင် ကတ်များဖြင့် အားပြန်သွင်းရန်၊ သို့သော် ဘဏ်တွင် ဤဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဦးစွာစစ်ဆေးရပါမည်။ အဲဒါကို ထောက်ပြဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဘဏ်တိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ATM စက်များမှ မိုဘိုင်းငွေဖြည့်သွင်းခွင့် မရှိပါ။
ထို့အပြင်၊ ATM တစ်ခုစီတွင် ကွဲပြားခြားနားသော အားပြန်သွင်းနည်းများ ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် သင့်ဘဏ်ကို ကြည့်ရှုပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ATM စက်များတွင် မိုဘိုင်းကတ်ကို အားပြန်သွင်းရန် အဆင့်များမှာ-
သင့်ဘဏ်ကတ်ကို ATM တွင်ထည့်ပါ။
လုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦး၏ ဖြစ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ။
အားပြန်သွင်းရန် ပမာဏကို ထည့်ပါ။
ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များသည် စားသုံးမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။. ၎င်းတို့သည် သင့်မိုဘိုင်းလိုင်းသို့ သင်ဝင်ရောက်လိုသော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည့် မတူညီသောပမာဏများဖြင့် လာပါသည်။
သင့်မိုဘိုင်းလ်ကို ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ဖြင့် အားပြန်သွင်းရန်၊ ၎င်းတို့ကို kiosks၊ စီးပွားရေးရုံးများ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စသည်တို့တွင် ဝယ်ယူပါ။
ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များကို အသုံးပြုရန်၊ နောက်ကျောရှိ အသက်သွင်းကုဒ်ကို ရှာဖွေပြီး အားပြန်သွင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များကို ရှာဖွေပါ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ဘဏ်များ » ကတ်ဖြင့် မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ပါ။